Kedu ihe gbanwere na Ọrụ Nlekọta Ahụ Ike SEO?
Oge na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ọ bụghị ihe ijuanya na nlekọta ahụike SEO agbanwewo ọtụtụ n'ime afọ ole na ole gara aga. N'okwu a taa, m ga-akọ banyere mgbanwe ndị dị oke mkpa bụ ndị metụrụ ọrụ SEO aka na afọ ole na ole gara aga, nke mere na ọ ga-adị mfe maka ndị na-ahụ maka ahụike iji chọpụta otu ụzọ ha kwesịrị isi mee ka ebe nrụọrụ weebụ ha dị ọhụrụ. Ntre, nso ikpere.
Ọdịdị Afọ Ogologo bụ Key
Na 2017, ọnụọgụ ndị ọrịa na-agbanye na weebụ iji chọọ ụdị dịgasị iche iche nke isiokwu metụtara ahụike. na-aga n'ihu na-eto eto. Ajụjụ ndị mmadụ na-enyocha na-adịwanye ogologo oge ma nwee nkọwa zuru ezu karị. N'ihi nke a, Google na-akawanye mma n'ịchọpụta ebumnuche onye ọrụ ma na-alọghachi ihe ndị dị mkpa karị.
Na-echeba ihe ndị ahụ e kwuru n'elu, anyị nwere ike ịme ihe ndị a: search engines na-ahọrọ ebe nrụọrụ weebụ na ogologo oge, ọdịnaya mbụ nke na-adabere na ndị na-atụ anya ya. N'ihi na engines ọchụchọ taa nwere ike ịchọta ngwa ngwa na ogo gị ọdịnaya, a na-atụ aro ya na ị na-elekwasị anya n'ịmepụta ihe ọmụma na ederede.
Maka ụlọ ọgwụ na ọrụ ahụike, ha ga-elekwasị anya karịa n'ebumnuche karịa okwu kpọmkwem mgbe ha na-eme mkpọsa SEO. Nnyocha, njikarịcha ebe nrụọrụ weebụ, na nhazi ọdịnaya bụ ihe atọ ndị na-elekọta ahụike kwesịrị ịtụle ka ha na-abanye n'ime ụwa SEO.
Ihe dị mkpa maka nyochacha ekwentị na Njikọ Njikọ Aka
Na 2012, Google kwalitere nkwalite dị mkpa. Ọ bụ ihe niile gbasara ogo ebe dị elu ma ọ bụrụ na ha ejiri usoro ime njikọ aka. N'okwu dị mfe, mgbe ọrụ achụmnta ego na-adọta mma SEO njikọ ma wuo netwọk ha ma n'ụzọ ziri ezi na n'eziokwu, ha na-enweta ikike nchịkọta Google na ọkwa dị elu na SERP. Rịba ama na ọdịnaya ga-adịkwa elu ma dị mkpa maka nyocha ndị ọrụ. Buru n'uche: Google ga - ama ma ọ bụrụ na mmadụ edepụtawo ederede site na saịtị ọzọ.
Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, Google gbanwere ogo algorithm ọbụna karịa - nchọnchọ ahụ malitere ịnye mmasị na ibe weebụ kachasị mma.Nke a na-eme ka ahụike na-eme ka ha nwee ike ịkwalite ihe onwunwe ha na ibute peeji maka ngwaọrụ mkpanaka iji nọgide na-arụ ọrụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ihe mbụ ndị na-elekọta ahụike kwesịrị ịghọta bụ ihe mere ndị ọbịa ji abịa na ebe nrụọrụ weebụ ha.Nzọụkwụ nke abụọ bụ maka ịchọta ebe saịtị dị iche iche chọrọ nwelite - nke a nwere ike ime ka gị na ebe nrụọrụ weebụ dị. Ozugbo ị ghọtara azịza ndị ọrịa gị na-achọ, nye ha akụkọ dị mkpa, na-egosi ụdị usoro ga-arụ ọrụ kacha mma. Ọ bụkwa ihe dị mma iji tinye data nchịkọta weebụ maka nhụzi dị mma.
Dịka ị nwere ike ịhụ, ọdịnihu nke SEO bụ ihe gbasara ọnọdụ. Usoro SEO gị kwesịrị ịgagharị na ịchọpụta mkpa nke ndị ọrịa gị. Lekwasị anya na ịmepụta ihe bara uru ma na - emetuta - ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe e mesịrị, engines ọchụchọ ga - akwụ gị ụgwọ dị elu. Nke ahụ bụ maka ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọrọ ịkọrọ gị SEO echiche maka melite ọrụ ahịa, atụla ihere iji kpọtụrụ ìgwè Semalt anyị. Anyị nwere mmasị ịnụ ihe n'aka ndị na-agụ akwụkwọ anyị Source .